David Beckham oo soo xushay kooxdiisa Riyada ee ka kooban SHAN ciyaartoy – Gool FM
(Yurub) 23 Mar 2020. Halyeeyga reer England iyo kooxaha Manchester United iyo Real Madrid ee David Beckham ayaa shaaca ka qaaday qaar ka mid ah xulashooyinkiisa xiddigaha uu ugu jecelyahay asiga ahaan.
David Beckham wuxuu doortay koox ka kooban SHAN ciyaartooy, kuwaas oo ah kuwa ugu fiican taariikhdda kubadda cagta, asiga ahaan.
David Beckham ayaa doortay laba ka mid ah saaxiibadiis ay iskala soo shaqeeyeen kooxda kubadda cagta Real Madrid, kuwaasoo kala ah laacibka reer Brazil ee Ronaldo iyo Zinedine Zidane.
Beckham ayaa ka doorbiday Lionel Messi xiddiga ay ku dagaalamaan kubadda cagta ee Cristiano Ronaldo, wuxuuna afarta xiddig kale uu ka dhigay Beckham, Ronaldo, Zidane iyo goolhayaha reer Denmark ee Peter Schmeichel.
Haddaba dhanka hoose kaga boggo shaxda kooxd Riyada ee ka kooban SHAN ciyaartoy ee uu soo xushay David Beckham waxaana ka mid ah: